Olee otú mbubata ihe MTS File ka iMovie
Part 1: Olee mbubata mts ka iMovie on Mac
Part 2: Gịnị MTS faịlụ-apụghị dị ka iMovie
Mgbe edezi video faịlụ site na iji iMovie na exporting (azọpụta) ha na gị na Mac kọmputa ma ọ bụ iPhone / iPad, ị nwere ike họrọ onye ọ bụla n'ime ndị na-esonụ formats:
Na-ekwu, ebe a ị ga-amụta banyere otu oru oma-akpọ ngwá ọrụ Video Converter Ultimate site Wondershare na-enye gị iji tọghata gị MTS faịlụ ka iMovie dakọtara format mfe na ngwa ngwa.
Banyere Wondershare Video Converter Ultimate
Wondershare Video Converter Ultimate Dị maka ma Windows na Mac kọmputa na ị nwere ike ibudata ngwa site na njikọ ndị nyere na njedebe nke nkebi nke a.
Wondershare Video Converter Ultimate Bụghị nanị-enye gị ohere iji tọghata gị MTS faịlụ na iMovie dakọtara format kamakwa-enyere gị aka nyefee faịlụ gị họọrọ ngwaọrụ mgbe ịga nke ọma akakabarede.
Ọ bụghị nanị na nke a, Wondershare Video Converter Ultimate abịa na ọtụtụ ndị ọzọ na-eme ka ndụ gị mfe karị mgbe ọ na-abịa converting na / ma ọ nkwanye video na ọdịyo faịlụ ka dị iche iche formats na / ma ọ bụ n'ihi iche iche na ngwaọrụ.
N'okpuru ebe a bụ ghọta nke a ole na ole isi atụmatụ na Wondershare Video Converter Ultimate enye:
• Ọkụ - Wondershare Video Converter Ultimate-enye gị ohere ọkụ nke converted faịlụ ka a DVD na ike a data ma ọ bụ mgbasa ozi diski. Tụkwasị na nke a, usoro ihe omume na-ahapụ gị mepụta ISO faịlụ nke converted videos na ị nwere ike ire iji ọkacha mmasị gị mbiet diski burner ma ọ bụ ugwu ya na a mebere image mbanye.
• Download - Mgbe ị wụnye Download button (ọzọ aka mkpa na Mac), ị nwere ike ibudata vidiyo si na online gụgharia video saịtị ziri ezi na ihe nchọgharị weebụ gị. Mgbe nbudata, ị nwere ike tọghata, ọkụ, na / ma ọ bụ nyefee ha gị họọrọ ngwaọrụ.
• Media Server - Nke a taabụ bụ ugbu na n'elu nke interface na-enye gị ohere enuba gị videos ka a ejikọrọ TV.
• ojiji-Specific Nchigharị - The ngwa-enye gị ohere iji tọghata videos iche iche ọdịyo na video formats na ndabere nke iche ngwaọrụ, faịlụ formats, ma ọ bụ ebe ị chọrọ ikere òkè ha online.
Wondershare Video Converter Ultimate Download njikọ
N'ihi na Windows: http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html
N'ihi na Mac: http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/
Olee otú Jiri Wondershare Video Converter Ultimate iji tọghata Files maka iMovie
o 1. Iji n'elu njikọ ibudata na wụnye ziri ezi version nke Wondershare Video Converter Ultimate dị ka kwa n'elu ikpo okwu gị na kọmputa. (The Windows version usoro ihe omume a na-eji ebe a maka ngosipụta na screenshots.)
2. Ozugbo arụnyere, abụọ pịa akara na-na desktọọpụ ihuenyo ẹkedori usoro ihe omume. Gbaa mbọ hụ na tọghata button họrọ si n'elu nke interface.
3. Mepee nchekwa ebe MTS faịlụ na kwesịrị na-converted bi. Pịa na ịdọrọ ndị MTS faịlụ banye n'etiti ngalaba nke usoro si interface. Chere ruo mgbe faịlụ na-agbakwunyere Wondershare Video Converter Ultimate.
4. Site nri ebi ndụ nke usoro ihe omume si window, si n'okpuru mmepụta Format ngalaba, pịa ala akụ si nri nke ugbu a họrọ mmepụta usoro.
5. Site egosipụta igbe, pịa Format nhọrọ si n'elu. Jide n'aka na Video nhọrọ họrọ si rịbọn n'elu egosipụta formats. Si dị mmepụta format ụdị, pịa iji họrọ onye nke ị chọrọ MTS faịlụ ka converted. (DV họrọ ebe a maka ngosipụta.)
6. Back na isi interface, optionally i nwere ike pịa More button (nọchiri anya atọ ntụpọ na ugbu ọzọ na mmepụta nchekwa ubi na-egosipụta na ugbu a họrọ mmepụta nchekwa), na họrọ a dị iche iche ebe nchekwa ebe ị chọrọ converted faịlụ ka -azọpụta.
7. Optionally, na ala nke ekpe ngalaba nke Wondershare Video Converter Ultimate isi interface, pịa ala akụ ọzọ na Atọrọ labeelu iji họrọ a dị iche iche preset maka mmepụta mma. Alternatively, ị nwere ike pịa bọtịnụ Mwube (na gear nnọchianya) na-akọwa gị omenala mmepụta ntọala.
8. N'ikpeazụ pịa tọghata button na ala-nri akuku nke interface na-amalite akakabarede.
9. Chere ruo mgbe faịlụ a ọma converted.
10. Ozugbo mere, pịa Open nchekwa button na ala nke etiti ngalaba nke interface.
11. Mgbe mmepụta nchekwa emepe, nso Wondershare Video Converter Ultimate.
12. Jiri gị họọrọ usoro agafeta converted faịlụ ka Mac kọmputa nwere iMovie arụnyere na ya.
Olee otú mbubata a converted Video ka iMovie on Mac
Mgbe i soro n'elu nzọụkwụ iji tọghata otu MTS faịlụ gị họọrọ iMovie dakọtara Ọkpụkpọ na bufee converted faịlụ na gị na Mac kọmputa nwere iMovie arụnyere, ị nwere ike na-eso nzọụkwụ nyere n'okpuru mbubata faịlụ iMovie:
1. Open iMovie na gị Mac kọmputa.
2. Pịa File menu si n'elu nke interface.
3. Site egosipụta menu, pịa Import Movies.
4. Site meghere igbe, ịchọta na pịa iji họrọ converted faịlụ na ị chọrọ mbubata ka iMovie.
5. Ozugbo họrọ, si ala ngalaba nke igbe, pịa iji họrọ Mepụta ọhụrụ Omume bọtịnụ redio.
6. dịnụ ubi, pịnye a aha maka ọhụrụ omume.
7. Optionally, ị nwere ike họrọ gị họọrọ video size si Import 1080i video dị ka ndọpụta ndepụta dị ka mkpa.
8. Gbaa mbọ hụ na Copy faịlụ bọtịnụ redio na-ahọrọ si ala-ekpe ngalaba nke igbe iji jide n'aka na mbụ faịlụ na-adịghị gbanwetụrụ, na oyiri na-kere mgbe ị dezie video.
9. Pịa Import na ala nke igbe mgbe mere.
10. Chere ruo mgbe video faịlụ a dị ka iMovie.
11. Chere ruo mgbe iMovie site achọrọ thumbnails.
12. Ozugbo mere, ị nwere ike na-amalite na-eme achọrọ mgbanwe converted na kwukwara video.
The Advanced Video nzuzo High Definition (AVCHD) video faịlụ na-weghaara iji a camcorder ma ọ bụ video igwefoto eji .MTS ndọtị. N'ihi na ndị a faịlụ ndị raw na n'ihi ụfọdụ na-agaghị emeli, na ha nwere ike ghara dị ozugbo na iMovie. Na-ekwu, otu oru oma akakabarede ngwá ọrụ dị mkpa iji tọghata MTS faịlụ na iMovie akwado format tupu ha nwere ike dị ka usoro ihe omume maka inwekwu edezi ma ọ bụ mgbanwe dị mkpa.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ngwa dị na ahịa na ike tọghata MTS faịlụ ka iMovie akwado usoro, Wondershare Video Converter Ultimate ga-gị mma nzọ dị ka ọ na-enye onye ọrụ-enyi na enyi interface na-eme ka n'ozuzu akakabarede aga-eme mfe.
> Resource> iMovie> [Sloved] Olee otú mbubata mts ka iMovie